Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka July 8, 2015	0 191 Views
Dadyowga Shiinaha ayaa lagu tiriyaa umadaha aragtida qaldan ka aaminay Islaamka iyo Muslimiinta tan iyo September 11, 2001, tiiyoo dacaayadda warbaahinta reer Galbeedkuna ay muuqaal qaldan ka gudbiso dunida Muslimka.
Intii hadaba lagu guda-jiray banbixii Istanbul, dibadbaxyaasha ayaa gubay xarumo badan oo muwaadiniin Shiina ahi leeyihiin. Waxaa kale oo la arkayay indha-yar ku qeylinaysa “Ma nihin Shiinees, waxaynu nahay Kuuriyaan.”
Fogaan-aragyada ayaa soo gudbinayay Bilayska Turkiga oo isku dayaya inay badbaadiyaan muwaadiniinta indha-yarta ah iyo inay ka hortagaan dhimasho ama dhunsasho lagula kaco dadka indha-yarta ah hantidooda.
Si lamid ah Turkiga, dowladda Malaysiya war-qoraal ah oo kasoo baxay xafiiskeeda ayaa lagu yiri; dadka iyo dowladda Malaysiyaba waxaa walaac ku haya xadgudubka lagu hayo Muslimiinta Shiinaha. Waxay dowladda Malaysiya ka quudda-reynaysaa Shiinaha inay xal u hesho dhibaatada haysata muwaadiniinteeda Muslimiinta ah.
Muslimiinta Shiinaha ayaa xiriir dhalasho iyo dhaqanba la wadaaga dadyowga Turkiga. Waxayna asal ahaanba kasoo jeedaan geyiga Turkiga. Tallaabadanna waxay u muuqataa dhawaaqii ugu horreeyey uu beerka u qaboojay Muslimiinta Shiinaha ku nool. Waxayna dib usoo wadaamisay rajadoodii ceel-guntii dhex tiilay. Dhaleeceymahan ayaa hadaba ku kalifi kara in maamulka Shuyuuciyadda wax ka badalo siyaasadiisa gudaha ee Muslimiinta ku nool dalkiisa.
Balse taasi waa xalka laga dhur-sugi karo Shiinaha. Inta laga gaarayase, Muslimiinta Shiinaha waxay qaadanayaan xilliyo adag inay ku sugaan natiijo loo aayo oo ka dhalata gargaar uga yimaadda dunida Muslimka.
Waxaa qoray Zakariya Hassan.
Previous: Shiinaha iyo Turkiga oo isku qabtay Qadiyad Islaami ah!!
Next: Daawo qiimaha ay midnimadu leedahay!!
Hal-ku-dhegga Niyad-jabka – Maalinta Caalamiga ee Caafimaadka 2017